Ndibhabha njani kwiNdlwane yeCuckoo, nguSydney Bristow
Kwaye sele kukho abalinganiswa ababini abakwazi ukubhabha phezu kwendlwane ye-cuckoo. Okokuqala, uRandle Patrick McMurphy, esibeke kuye sonke ubuso bembali yembali uJack Nicholson ekuchazeni kwakhe okuphambeneyo kwe-protagonist yeli bali elibuhlungu malunga nezibhedlele zengqondo kunye nabemi bazo. Kwindawo yesibini ngoku sifumana uSydney, ibhinqa eliphakathi phakathi komlinganiswa wokwenyani kunye neli gama lisetyenziswa kwibali lenqanaba lokuphambana okuzicingelayo ukusuka kwixesha elibuhlungu apho wagqiba ekubeni alishiye ihlabathi ngenqwelomoya esebenza kuphela ukwaphula amathambo ahlukeneyo. .
Inyani yeyokuba isikweko esingaqhelekanga sokubhabha phezu kwendlwane ye-cuckoo sibonakala kum sesona sichanekileyo ukuchaza nasiphi na isigaba sokudakumba kwengqondo. Akukho nto iphambeneyo kwaye kwangaxeshanye ingumfuziselo. Kwimeko engaqhelekanga yombono uhlala ukuba umlingo wokuqalwa komntu oqamba ingqikelelo. Ukubhabha phezu kwendlwane ye-cuckoo ukuchaza oko kuphuma kuwe, ukuzinikela komntu okwenzela ukuthanda komntu ekunqongophelweni kolawulo lwenqwelomoya engenantsingiselo.
Kwaye ngaphandle, njengoko nditshoyo, uSydney uzame ukubhabha. Ngokomgaqo hayi kwindlwane ye-cuckoo kodwa ukusuka kulaa bhulorho apho wazama ukuthi ndlela-ntle kwihlabathi, ihlabathi elingenanto njengoko libonakala lizele iintsikelelo kunye namathamsanqa kwinto eqhelekileyo abantu abayijonga njengolonwabo.
Ibali lokwenzeka kumathambo kaSydney livela kuAna, owenza iprojekthi kumlingiswa wakhe ukuhamba ngelo xesha phakathi koogqirha bengqondo, amayeza kunye namaziko okuvalela. Kwaye elo bali lihamba ngeentsuku ezingama-37 awathi uSydney wayehamba ejikeleza loo ndlwane ye-cuckoo ukusuka phezulu, ekhangela indawo yokumisa ngaxeshanye waqala ukonwabela iimbono.
Kuba ngamanye amaxesha oko depersonalization, loo lahleko yentando eyakha ikamva lethu, ikwanceda ukusifumana singabantu kwaye singenakuzinceda, sibhentsisiwe kodwa sinomnqweno wokuziva kwakhona ngamandla amakhulu ngaphandle kweendonga eziphakanyiswe iminyaka.
Kwidayari ebhalwe "izandla ezimbini" phakathi kukaAna kunye ne-alter ego yakhe uSydney, sifumanisa ibali lokunyuka nokuhla kweso silayidi esinokuthi ingqondo ibe nayo. Kodwa ngaphezu kwako konke sibona indlela ubuntu, ngengqiqo yabo enobubele, bomlinganiselo omkhulu phakathi kwabo bamanyana phezu kobunzima. Kwaye akukho bunzima obubi ngaphezu kwemimoya evuswe ngaphakathi kubo bonke abo babhabha phezu kwesidleke se-cuckoo ngexesha elithile.
Ngoku ungathenga incwadi ethi, Indlela endabhabha ngayo Phezu kweNest yeCuckoo, idayari kaSydney Bristow, Apha:
Iilebula Iincwadi zangoku, ISydney bristow